စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးသွားကိုသွားဘို့အပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု VS ဝယ်လေယာဉ်လေယာဉ်လေကြောင်းသဘောမျိုးလုပ်ရှင်းပြ Cardone Gulfstream G200 ပေးသနား ကို http://wysluxury.com/location/ သငျသညျအနီးတည်နေရာ
သငျသညျပုဂ္ဂလိကပျံသန်းသည့်အခါသင်တို့နှင့်အတူဖြစ်ရန်မလိုပါ 200 တစ်ဦးအခန်းအတွက်ကျပ်ကလူ, ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာကိုသင်အချိန်ကုန်သက်သာမယ့်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦးကလေယာဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. Everyone saysaplane doesn’t make sense. These people don’t have planes. ငါ့ကိုတကယ့်ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ဦးပြရန်နှင့်သင်တို့ကိုငါနေတဲ့ဂျက်လေယာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုပြသပါလိမ့်မယ်. Grant’s choice wasamid-Size Gulf Stream 200. အချိန်ကငွေဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်မိမိအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချိန်ဝယ်ယူ. ငွေရတတ်သောသူ Get နှငျ့သငျလှနျးတဲ့ဂျက်လေယာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်. ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ?
Gulfstream ၏ Delivery ယူပြီး 550 – Cardone 10x လေယာဉ်တင်လေကြောင်းလိုင်းသစ်ကိုပေးသနား $50 ဒေါ်လာသန်းဂျက်
It’s bigger, မြန်မြန်, နှင့်ငါ့ပထမဦးဆုံး 10x လေကြောင်းလေယာဉ်ထက် သာ. ကောင်း၏. သတိရ, if you’re not growing, you’re stagnant…and staying stagnant will always lead to contraction. You can fakealambo but you can’t fakeag550 jet. ထိပ်တန်းရောင်းချသူ Get Grant က Cardone အော်ဒီယိုစာအုပ်များ ရောင်းတူသော OR ရောင်းချ, နီး'S Survival လမ်းညွှန်, THE 10x ဥပဒေ, သင်ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်နေတဲ့နောက်ဆုံး, အောင်မြင်မှုအများအပြားပိုပြီး download, စိုးမိုးမှု.
Gulfstream အတွက်က Galaxy လေကြောင်းဝယ်ယူ 2001. အဆိုပါဝယ်ယူကုမ္ပဏီ၏မူလက Galaxy လေယာဉ်တင်လေယာဉ်ကိုအမွေကိုမြင်လျှင်, အရာအကြားထုတ်လုပ်မှုခဲ့သည် 1999 နှင့် 2001. မူရင်းက Galaxy Gulfstream အားဖြင့် G200 အမည်ပြောင်းခဲ့သည်. အကြား 2001 နှင့် 2011, Gulfstream နီးပါး၏ထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ် 250 အဆိုပါ Gulfstream ၏ယူနစ် 200 လေယာဉ်ကိုဂျက်လေယာဉ်. အဆိုပါ G200 အတွက်အစားထိုးခဲ့သည် 2012 အဆိုပါ G280 အားဖြင့်. သငျသညျဝယ်မယ့်ဇိမ်ခံဂျက်လေယာဉ်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ဤဆောင်းပါးတွင်အဘယ်ကြောင့်သင်သိပါစေပါလိမ့်မယ် Gulfstream 200 သင့်ရဲ့ပထမဆုံးရှေးခယျြမှုဖြစ်သင့်ပါတယ်.
Grant က Cardone တစ်ဦးကို Global နှိုင်းယှဉ် 6000 မိမိအ Gulfstream မှ
သင်သည်အခြားဂျက်လေယာဉ်ကိုကျော်တစ်ဦး G200 ဝယ်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဒီစူပါအလတ်စားဂျက်ပိုကြီးတဲ့အခန်းဂျက်လေယာဉ်များ၏သက်သာခြင်းနှင့် range ကမ်းလှမ်း. Its spacious cabin comfortably seats nine passengers with stand-up headroom of 6’3″, တခြားအလားတူဂျက်လေယာဉ်ကမ်းလှမ်းမှုထက်ပိုအာကာသအရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Gulfstream G200 မရပ်မနား Transcontinental ခရီးသွားများအတွက်စံပြသည်နှင့်တစ်ခရုဇ်မြန်နှုန်းရှိပါတယ် 540 တစ်နာရီမိုင်. လည်း, အဆိုပါ G200 င်း၏အတန်းထဲတွင်အကြီးဆုံးအိတ်ကိုစွမ်းရည်ရှိပါတယ်.
– အများဆုံးခရုဇ်မြန်နှုန်း: 470kts
– ပျမ်းမျှပိတ်ပင်တားဆီးမှုမြန်နှုန်း: 396kts
– အချည်းနှီးသောထိုင်ခုံနှင့်အတူ range: 3,530nm
– သိမ်းပိုက်ထားသောထိုင်ခုံနှင့်အတူ range: 3,130nm
– တောင်တက်နှုန်း: 3,700ပေ / မိနစ်
– ပျမ်းမျှလောင်စာဆီမီးလောင်: 278ကောင်မလေးတစ်ယောက် / နာရီ
– ဟန်ချက်ညီသောလယ်အရှည်: 6,600ပေ
– အများဆုံးလည်ပတ်မှုမြင့်: 45,000ပေ
– လောင်စာဆီမီးလောင်: 278Gal
– လေယာဉ်အမြင့်: 43,000ပေ
– $ 5.00 / ကောင်မလေးတစ်ယောက် @ လောင်စာဆီကုန်ကျစရိတ်: $1,390
– cabin အသံအတိုးအကျယ်: 869CuFt
– cabin ရဲ့ width: 7.20ပေ
– cabin အရှည်: 24.5ပေ
– cabin အမြင့်: 6.25ပေ
– ရှည်: 58.1ပေ
– အမြင့်: 21.4ပေ
– အရှည်: 62.3ပေ
– အများဆုံး takeoff အလေးချိန်: 35,450ပေါင်
– မက်စ် payload: 4,050ပေါင်
– အခြေခံပညာလည်ပတ်မှုအလေးချိန်: 19,950ပေါင်
– အပြည့်အဝလောင်စာဆီနှင့်အတူ payload: 650ပေါင်
– အသုံးဝင်သောလောင်စာ: 15,000ပေါင်
– ထိုင်ခုံ: 8
– ပြင်ပအိတ်ကိုစွမ်းရည်: 125CuFt
– internal အိတ်ကိုစွမ်းရည်: 25CuFt
သငျသညျအတွက်လေကြောင်းလိုင်းခရီးသွားအပေါ်မူတည်ကြသည်မဟုတ်သည့်အခါသင်လုပ်နိုင်အနည်းငယ်အရာများစာရင်း 1 နေ့
အဆိုပါ Gulfstream G200 နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အကွာအဝေးနှစ်ခုလုံးကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းတစ်ခုချွေလေယာဉ်များဖြစ်ပါသည်. အပြင်ကနေ, အဆိုပါ G200 ကျယ်ဝန်းသည်နှင့်တစ်ဦးအလွန်အထင်ကြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်ရှိပါတယ်. ထိုကွောငျ့, တစ်ဂျက်လေယာဉ်ပျံများအတွက်စျေးဝယ်သည့်အခါ, မှရှေးခယျြ Gulfstream လေယာဉ်စာရင်း.
10x လေကြောင်းလိုင်း၏ပြကွက်များနောက်ကွယ်တွင် – Cardone ပေးသနား
မှာထုတ်ကုန်၏ Cardone 10x စာရင်းပေးသနား https://goo.gl/r51fVY